जनै के हो ?, लम्वाई कति हुनुपर्छ ? | NepalDut
जनै के हो ?, लम्वाई कति हुनुपर्छ ?
श्रावणशुक्ल पूर्णिमाको दिन विधिपूर्वक पूजाआजा गरी पवित्र बनाईएको जनै धारण गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ । नेपालकै तराई भेगमा यही दिन दिदी बहिनीले दाजु भाइहरुलाई राखी बाँध्ने चलन समेत रहेको छ ।
ब्राह्मण, क्षत्री र वैश्यहरु जनै लगाउँछन् । उनीहरुको लागि यो पर्व पवित्र पर्वको रुपमा मान्ने गरिन्छ । तर, धेरै तागाधारी (जनैधारी) हरुलाई जनैको बैज्ञानिक महत्वबारे थाहा नभएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले त्यसको महत्वबारे प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
हामै धेरैले देखेका हुनसक्छौं कुनै पनि संस्कारयुक्त तागाधारीहरुले आफ्नो बाँया काँधदेखि दायाँ कम्मरसम्म पुग्नेगरी एक कच्चा धागोलाई बेरेर राखेको हुन्छ । त्यही धागो शौच गर्न जाने बेलामा दायाँ कानेमा बेरेर गएको हुन्छ । त्यही धागोलाई हामी जनै भन्दछौं । यो जनैमा तीन वटा सूत्र, नौ वटा तार र पाँचवटा गाँठाहरु रहेका हुन्छन् । यही जनैलाई संस्कृतमा यज्ञपवित भनिन्छ र पहिलो पटक यज्ञपवित गर्ने दिनलाई सोह्र संस्कार मध्येको एक दिन पनि मान्ने गरिएको छ । यो जनै सूतबाट बनेको पवित्र धागो हो । जसलाई तागाधारीहरुले बायाँ काँधबाट सुरु गरेर दायाँ हातको मुनीसम्म पुग्नेगरी पहिरिने गरिन्छ ।
यज्ञोपवितको लम्बाई ९६ अंगुल हुन्छ । यसको अभिप्राय यो हो कि जनै धारण गर्ने व्यक्तिमा ६४ कला कलाहरु र ३२ विद्या हुनुपर्दछ ।
यदि छैन भने पनि सिक्ने कोशिस गर्ने स्वभावको हुनु पर्दछ । जसमध्ये ३२ विद्यामा चार वेद, चार उपवेद, छह अंग, छह दर्शन, तीन सूत्रग्रन्थ, नौ अरण्यक पर्दछ भने ६४ कलाहरुमा वास्तु निर्माण, व्यञ्जन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यन्त्र निर्माण, सिलाई, कटाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि पर्दछ।